faah faahin laga helayo Weerar Al-shabaab Ay Kuqaadeen Saldhig ciidan | Allbalcad Online
Home WARARKA faah faahin laga helayo Weerar Al-shabaab Ay Kuqaadeen Saldhig ciidan
faah faahin laga helayo Weerar Al-shabaab Ay Kuqaadeen Saldhig ciidan
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay markale weerar khasaaro geystay ka fuliyeen degaano ka tirsan Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Weerarka ayaa waxaa lagu qaaday Saldhig ay ku sugnaayeen Ciidamada booliska Kenya, kaas oo ku yaalla tuulada Sheekh Barroow ee hoos tagta Mandheera, waxana halkaasi ka dhacay dagaal saacado badan socday.
Waxaa jiro khasaaro kala duwan oo dagaalkaas ka dhashay, hayeeshee Al-Shabaab oo sheegtay weerarkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay ku gubeen laba Gaari oo ay lahaayeen Ciidamada Booliska Kenya.
Saraakiisha Ciidamada Booliska Kenya ee Gobolka Waqooyi Bari weli kama hadlin weerarkaas lagu qaaday saldhigooda ku yaalla tuulo ku taalla duleedka Magaalada Mandheera, saldhigaas oo dhowr jeer la weeraray.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamada Booliska Kenya ku leeyihiin degaanka Amuuma oo katirsan isla gobolka Gaarisa, waxaana weerarkaas ku dhaawacmay hal askari halka laba askari oo kale lagu la’yahay
Previous articleMidowga Musharaxiinta Madaxweynaha oo War Kasoo saaray Gudoonka Cusub ee Ay doorteen Gudiga Doorashooyinka
Next articleTaliyaha Danab oo Walaac Kamuujiyay ka bixitaanka Soomaaliya ee Ciidamada Mareykanka